गृहमन्त्री बादलले ५० दिनमा के–के गरे ? यस्तो छ ५० कामको फेहरिस्त::त्रिशुलीखवर
गृहमन्त्री बादलले ५० दिनमा के–के गरे ? यस्तो छ ५० कामको फेहरिस्त
काठमाडौं, वैशाख ३ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले कार्यभार सम्हालेको ५० दिन पुगेको छ । ५० दिन पूरा भएको अवसरमा मन्त्री बादलले यो अवधिमा गरेका कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका छन् ।